भोलि देखि सार्वजनिक यातायात खुल्ने – Sandesh Press
June 24, 2021 870
भोलि देखि सार्वजनिक यातायात खुल्ने, सरकारले गर्यो यस्तो निर्णय करिब दुई महिनाको लकडाउनले हुँदा खाने नागरिक निकै आत्तिएका छन् । मजदूर वर्गलाई लकडाउनले निकै समस्यामा पारेको छ । मजदूरी गरेर जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने व्यक्तिहरु अब लकडाउन खुल्ने आशमा छन् ।
यसै कुरालाई ध्यानमा राख्दै देशभर जारी लकडाउनको स्वरुप परिवर्तन हुने भएको छ । को-भिड-१९ सं’कट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले लकडाउनको स्वरुप परिवर्तन गर्ने र स्मार्ट लकडाउन जारी गर्ने निर्णय गरेको हो ।जसअनुसार सातामा दुई दिन बिदा हुने गरी निजी र सार्वजनिक सवारी-साधनमा जोर-बिजोर लागु गरिने भएको छ ।अब काठमाडौं उपत्यकामा असार १४ गतेसम्म निषेधाज्ञा हुने भएको छ । अबको निषेधाज्ञा भने खुकुलो बनाइने भएको छ । निजी सवारीलाई जोर-बिजोर अनुसार चल्न दिइने ललितपुरका प्रजिअ ढुण्डीप्रसाद निरौलाले जानकारी दिए ।।**अन्य थप समाचार हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला**
असार ६ गते दक्षिणकाली पुगेकी सन्तोषीले सुरेश तिमल्सिनासँग खाने र बासको समस्या भएको बताएपश्चात अभियुक्तले खाना र सुत्ने व्यवस्था मिलाइदिन्छु भन्दै दक्षिणकाली मन्दिर नजिकै जंगलमा पुर्याएका थिए ।
पक्राउ परेका तिमल्सेना बसमा सहचालकको काम गर्थे। घटना पछि उनी काठमाडौं आएर लुकीछिपी बसेका थिए। प्रहरीले उनलाई काठमाडौं-२७ कमलाक्षी इनबहालबाट पक्राउ गरेको हो। उनीमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
स्थानीय महिला आ’त्तिएर त्यहीं नजिकै रहेको इलाका प्रहरी कार्यालयमा खबर गरेपछि घटनास्थलमा अनुसन्धान गर्न प्रहरी टोली पुगेको थियो । महानगरीय प्रहरी परिसर महानगरीय अ’पराध महाशाखा, कीर्तिपुर वृत्तसहित त्रिवि शिक्षण अस्पतालका फरेन्सिक विज्ञसहितको टोली अनुसन्धानमा खटिएको थियो । ‘उनले शुरुमा घाँ’ ‘टी थि’ ‘चेर ज्या’ ‘न लिएको र पछि नचिनियोस् भनेर अनुहार क्ष’ ‘त वि’क्ष’त हुने गरी प्र’ ‘हार ग’रेको पाइयो,’ ती अधिकारीले भने ।
Prevपक्राउ परेका युवाको बयान, मैले भनेको मानिनन् त्यसपछि मैले सि’ध्याईदिए……
Nextबिहेमा गएका श्रीमान फर्केर घरमा आउदा कोठामा श्रीमतीसंग अर्कै परपुरूष देखेपछि ……
नायक पल शाहले भने, ‘म अर्काको जुठो खाँदिन ‘
मोटरसाइकलको पछाडि बसेका थिए तर घर पुग्न पाएनन्, बाटै यसरी भयो मृत्यु
ह्वात्तै घट्यो कुखुराको मासुको मूल्य, कति पुग्यो ?
ससुरालाइ बोकेर अस्पताल लैजाँदै एक बुहारी! उहाँलाइ उच्च सम्मानका साथ एक सेयर गरौं।